Froggy विज्ञापन -3of१ को पृष्ठ २ - Froggy विज्ञापन
समर्थन अप्रिल 30, 2021 अप्रिल 30, 2021 टिप्पणीहरू बन्द व्यापार विकासको लागि वेब होस्टिंगको महत्त्वमा
व्यवसायको विकास गर्नु सजिलो कुरा होइन। टेक्नोलोजी र उमेरको विकासको साथसाथै व्यावसायिक प्रवृत्ति पनि समय-समयमा परिवर्तन भइरहन्छ। यो डिजिटल युगमा, व्यक्तिहरू केवल टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा निर्धारण गरिएको छैन। टेलिभिजनमा तपाईंको उत्पादनहरू र सेवाहरूको विज्ञापन त्यति प्रभावकारी नहुन सक्छ। यस्तै राजमार्गको किनारमा बिलबोर्डहरू सहित। जब कोही सार्वजनिक वाहनहरूको साथ यात्रा गर्दछ, उदाहरणका लागि, यो ग्याजेट स्क्रिनमा घूरिएकोमा मग्न हुन सक्छ, यो ट्याब्लेट वा स्मार्टफोन हो।
समर्थन अप्रिल 30, 2021 अप्रिल 30, 2021 टिप्पणीहरू बन्द गुगल विज्ञापनमा (एड्वर्ड्स) गाइड ट्यूटोरियल २०२१
गुगल विज्ञापन (एड्वर्ड्स) गाइड जुन यस समयमा एकदम बृहत् छ, तपाईं प्रो खोज मार्केटर बन्नको लागि केहि महत्त्वपूर्ण चरणहरू अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ।
१ Tre ट्रेन्ड्स डिजिटल मार्केटिंग २०२१
समर्थन अप्रिल 30, 2021 अप्रिल 30, 2021 टिप्पणीहरू बन्द १ Tre ट्रेन्ड्स डिजिटल मार्केटि 16 २०२१ मा
डिजिटल मार्केटिंग चलनहरू बढ्न जारी छ। किन यस्तो हुन्छ? किनकि जबसम्म टेक्नोलोजी जारी रहन्छ, डिजिटल मार्केटिंग पनि सजिलै चल्नेछ ताकि यो द्रुत रूपमा विकास गर्न सक्दछ। तपाईंहरू जो ई-वाणिज्य मा संलग्न छन् वा ईन्टरनेटमा व्यापार गर्दै छन्, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ आजको व्यापारको प्रवृत्ति वा घटनाहरू, विशेष गरी भविष्यको समयको लागि। यसैले हामी एउटा विशेष व्यापक छलफल गर्छौं ताकि तपाईं यसलाई पूर्वानुमान गर्न सक्नुहुनेछ र मार्केटिंग रणनीतिहरूको समीक्षा गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले गरिरहनु भएको छ, यो उपयुक्त छ वा अवस्थित घटनाहरूको अनुसार अब छैन।
मार्केटिङ मार्केटिङ रणनीति, बजार प्रवृत्ति
समर्थन अप्रिल 30, 2021 अप्रिल 30, 2021 टिप्पणीहरू बन्द पूर्ण गाइड इ-कमर्स २०२१ मा
विद्यमान डिजिटल विकासको साथसाथै ई-वाणिज्यको विकास बर्ष-बर्ष तीव्र छ। यहाँ सम्म कि विश्व प्रसिद्ध ई-वाणिज्य कम्पनीहरु इन्डोनेसियाको बजार मा प्रवेश गरेका छन्। लाजाडा र इबे मार्फत अलीबाबाले इन्डोनेसियामा व्यापार विस्तार गरेको छ। अमेजन पनि त्यस्तै गर्न अफवाह गरिएको छ।
समर्थन अप्रिल 30, 2021 अप्रिल 30, 2021 टिप्पणीहरू बन्द उपकरण व्यवसाय परियोजना तपाईंको व्यवसाय मद्दत गर्न मा
सबै व्यवसायहरूलाई आवश्यक एक सीप परियोजना व्यवस्थापन र सहयोग हो। कुनै परियोजनाको अधिक परिणाम निश्चित रूपमा प्रारम्भिक योजना प्रक्रिया र अनुगमन प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ।
समर्थन अप्रिल 30, 2021 अप्रिल 30, 2021 टिप्पणीहरू बन्द ब्रान्ड गरिएको ट्राफिक भिजिटरलाई कसरी बढाउने तपाईंको व्यवसाय वेबसाइटमा
यदि तपाइँ ब्रान्ड ट्राफिक के हो भनेर थाहा छैन भने, यहाँ एक सरल व्याख्या छ: के तपाईंले गुगल जस्ता वर्गीकरण मेशिनमा तपाईंको आफ्नै नाम प्रविष्ट गर्नुभएको छ?
कसरी तपाइँको स्टार्टअप को लागी एक उत्पादक टीम को गठन
समर्थन अप्रिल 30, 2021 अप्रिल 30, 2021 टिप्पणीहरू बन्द कसरी तपाइँको स्टार्टअप को लागी एक उत्पादक टीम को गठन करने को लागी
वर्तमानमा, अधिक र अधिक व्यक्तिहरू आफ्नै स्टार्टअप कम्पनी निर्माण गर्न इच्छुक छन्। सामान्य रूपमा व्यापारको रूपमा, राम्रो स्टार्टअप कम्पनीको निर्माण गर्न, तपाईंले बलियो टोली निर्माण गरेर सुरु गर्नुपर्दछ।
समर्थन अप्रिल 30, 2021 अप्रिल 30, 2021 टिप्पणीहरू बन्द मा ग्राहक स .्लग्नता सुधार गर्न को लागी १० सल्लाहहरु
के तपाई आफ्ना ग्राहकहरुको ख्याल राख्नुहुन्छ?
धेरै ब्रान्डहरु केवल ग्राहकहरु कसरी आफ्नो सेवाहरु वा उत्पादनहरु को खरीद मा ध्यान दिन्छ। ग्राहकको संलग्नताले उनीहरूको मार्केटिंग रणनीति सूचीमा अन्तिम स्थान ओगट्न सक्छ।
समर्थन अप्रिल 30, 2021 अप्रिल 30, 2021 टिप्पणीहरू बन्द अनलाइन स्टोर स्थापना गर्नुहोस्
के तपाइँ तपाइँको अनलाइन स्टोर निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ? कहिलेकाँही अनलाइन स्टोर स्थापना गर्दा केही व्यक्तिलाई डर लाग्दो महसुस हुन्छ, विशेष गरी जब तपाईं प्रविधि साक्षर हुनुहुन्न। तर तपाईं एक्लो हुनुहुन्न। यहाँ WordPress को साथ एक अनलाइन स्टोर निर्माण को लागी सबै भन्दा व्यापक गाइड छ।
२++ प्रकाशक २०२१ का लागि उत्तम सीपीए नेटवर्क (अधिकतम भुक्तानी)
समर्थन अप्रिल 24, 2021 अप्रिल 25, 2021 टिप्पणीहरू बन्द २++ मा प्रकाशकहरू २०२१ को लागि उत्तम सीपीए नेटवर्क (उच्चतम भुक्तानी)
उत्तम सीपीए नेटवर्क:
जब यो अनलाइन पैसा बनाउनको लागि आउँदछ, मैले सबै तरिकाहरू प्रयास गरेको छु।
मैले गुगल AdSense को साथ शुरू गरें। त्यस पछि, मैले CP बर्ष अघि मेरो सीपीए यात्रा शुरू गरें।
मैले सम्बद्ध उत्पादनहरू प्रचार गर्न सुरू गरें। तर म यी उत्पादनहरू रूपान्तरण गर्न असफल भयो किनकि म ट्राफिक रूपान्तरण गर्न सकिन।
त्यसपछि मैले प्रयास गरे सीपीए मार्केटिंग... र द्रुत रूपमा यो महसुस गर्‍यो कि यो वेबसाइट ट्राफिक मुद्रीकरण गर्ने उत्तम तरिका हो।
मलाई लाग्छ कि सब भन्दा पहिलेको सीपीए नेटवर्क मैले लागू गरेको म्याक्सबाउन्टी थियो। म कुनै अनुभवको कारण अस्वीकृत भयो .. !!
त्यसपछि मैले सीपीए मार्केटिंग सिक्न शुरू गरें। केही अनुभव पाइसकेपछि, म २ देखि CP सीपीए नेटवर्कमा सामेल भएँ जसले नयाँहरू स्वीकार्छन्।
त्यसोभए दोस्रो पटक, मैले फेरि म्याक्सबन्टीको लागि आवेदन दिएँ र स्वीकृत भयो। म म्याक्सबाउन्टी खाता स्वीकारे पछि धेरै खुसी भए किनभने मैक्सबउन्टी मध्ये एक हो उत्तम सीपीए नेटवर्क.
मैले धेरै नेटवर्कहरूसँग काम गरें र तपाईसँग साझेदारी गर्न धेरै अनुसन्धान गरें शीर्ष सीपीए नेटवर्कहरू।
सीपीए (यसको लागि प्रति कार्य लागत) खडा हुन्छ; साधारण शब्दहरूमा, जब कसैले तपाईंको सम्बद्ध लिंक क्लिक गर्दछ र एक कार्य पूरा गर्दछ, सीपीए मार्केटिङ or प्रति कार्य मार्केटिंग लागत.
सीपीए नेटवर्क अनलाइन पैसा बनाउनको लागि उत्तम तरिका हो। केहि सीपीए मार्केटरले लाखौं डलर बनाउँदैछन् सीपीए मार्केटिंग नेटवर्क हरेक महिना।
धेरै सीपीए मार्केटिंग कम्पनीहरूले पैसा कमाउन उत्तम समाधान प्रदान गर्दछ सीपीए प्रस्तावहरू.
जब यो अनलाइन बाट पैसा कमाउने कुरा आउँछ सीपीए वेबसाइटहरु, त्यसोभए त्यहाँ हजारौं नेटवर्कहरू छन्। तपाईको वेबसाइटका लागि कुन CPA नेटवर्क उत्तम छनौट गर्न गाह्रो छ। तर यस लेखमा हामी तपाईसँग शीर्ष सीपीए नेटवर्क र तपाईले यी नेटवर्कहरूको बारेमा जान्नु आवश्यक सबै कुरा साझेदारी गर्दछौं।
तर यदि तपाईं सीपीए मार्केटिंगमार्फत कसरी पैसा कमाउने भनेर जान्नुहुन्न भने, पूर्ण पढ्नुहोस् सीपीए मार्केटिंग गाइड। यो गाइडले तपाईंलाई शून्य देखि नायकमा सीपीए मार्केटिंग सिक्न मद्दत गर्दछ।
मानौं तपाइँको वेबसाइट को लागी राम्रो ट्राफिक छ र लीड र बिक्री छैन। त्यसोभए तपाईंले आफ्नो साइटलाई मोनेटाइज गर्नुपर्छ सीपीसी विज्ञापन नेटवर्क। यी विज्ञापन नेटवर्कहरूले तपाइँको वेबसाइटमा तेस्रो पार्टी विज्ञापनहरू राखेर पैसा कमाउन मद्दत गर्दछ। तर निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको नेटवर्कसँग यी नेटवर्कहरूमा सामेल हुन राम्रो ट्राफिक हुनुपर्दछ। यदि तपाईंको वेबसाइटमा राम्रो ट्राफिक छैन भने, तपाईं सामेल हुन सक्नुहुन्छ साना प्रकाशकहरूको लागि विज्ञापन नेटवर्क र पैसा कमाउनुहोस्.
हाम्रो सिफारिश गरिएको सीपीए नेटवर्क सामेल हुन:
सर्वश्रेष्ठ सीपीए नेटवर्क २०२१:
यहाँ शीर्ष २० को सूची छ उत्तम सीपीए नेटवर्क सम्बद्धहरू र विज्ञापनकर्ताहरू सम्मिलित हुनको लागि 2021 र 2022.
सीपीएलएड - शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ सीपीए नेटवर्क।
TravelPayouts - यात्रा सम्बद्धका लागि सीपीए नेटवर्क।
MyLead - अग्रणी सम्बद्ध नेटवर्क।
एड्भेन्डर - सीपीए मार्केटिंग नेटवर्क
फायर एड्स - ग्लोबल एफिलिएट नेटवर्क
म्याक्सबाउन्टी - शीर्ष सीपीए मार्केटिंग नेटवर्क।
मद्रिभो - उच्च भुक्तानी सीपीए नेटवर्क प्रस्ताव गर्दछ
क्लिकडिलर - सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मार्केटिंग नेटवर्क।
टोरो विज्ञापन - सर्वश्रेष्ठ सम्बद्ध नेटवर्क।
स्पष्ट रूपमा - यो बन्द छ।
ग्लोबल वाइड मिडिया - विज्ञहरूका लागि उत्तम सीपीए नेटवर्क।
मिडिया विज्ञापन गर्नुहोस् - सीपीए नेटवर्क जसले Newbies स्वीकार गर्दछ।
A4D - शीर्ष सीपीए नेटवर्क २०२१।
सबै प्रस्तावहरू माथि
CPALead एक सीधा स्रोत को स्रोत सीपीए र सीपीआई नेटवर्क हो कि सबै प्रकाशकहरु को दैनिक भुगतान गर्दछ। Inc.500 को अनुसार, CPAlead विश्वको th० औं सब भन्दा द्रुत बृद्धि गर्ने कम्पनीको रूपमा मान्यता प्राप्त छ।
यसले विज्ञापनदाताहरू र प्रकाशकहरूलाई विशाल मार्केटिंग उद्योगमा उनीहरूको मार्केटिंग सीप विस्तार गर्न उत्तम अवसर प्रदान गर्दछ। यसले बजार र सम्बद्धहरूलाई एक एकीकृत प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ, तिनीहरूलाई उच्च लक्षित विज्ञापनहरू उत्पादन गर्न र उच्च स्वामित्व विपणन समाधानहरू द्वारा रूपान्तरण दर सुधार गर्न विचारहरू प्रदान गर्दछ। सीपीएलएडले विश्वास गर्दछ कि लक्षित दर्शकको बृद्धिमा बृद्धिसँग व्यवसाय बढ्छ।
यो शुरुआतका लागि उत्तम सीपीए नेटवर्क हो। मलाई यो नेटवर्क मनपर्दछ किनकि तपाईंलाई खाता स्वीकृतका लागि कुर्नु आवश्यक पर्दैन। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको खाता सिर्जना गर्नु हो, र खाता सिर्जना गरेपछि तपाईं लगइन गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं वेबसाइटको मालिक हुनुहुन्छ र सही मात्रामा ट्राफिक प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि सीपीएएलएडले ब्यानर विज्ञापनहरू प्रदान गर्दछ, देशी विज्ञापनहरू, मध्यवर्ती, पप-अन्तर्गत, पप-अप, सामग्री लक, र अन्य आला उपकरणहरू तपाईंको वेबसाइट ट्राफिक मोनेटाइज गर्न। CPALead को बारे मा अर्को राम्रो कुरा यो हो कि अब उनीहरु दैनिक भुक्तान प्रदान गर्दैछन्। यो एक मात्र हो CPA नेटवर्क जुन दैनिक भुक्तान गर्दछ। तर दैनिक भुक्तानको लागि, तिनीहरूसँग सीमित प्रस्तावहरू छन्।
यो एक हप्ता भरमा एक समर्थित टीम उपलब्ध छ, दिनको २। घण्टा, जसले तपाइँलाई तपाइँको प्रतिभा, अनुभव, र प्राविधिक सीप बृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ ताकि तपाइँ उत्पादन सम्बद्ध क्रसिंग टीमको सहयोगमा कम समयमा तपाइँको व्यापार बढाउन सक्नुहुनेछ। सीपीएलएड प्रकाशकहरू र विज्ञापनदाताहरूका लागि हाम्रो सिफारिश गरिएको सीपीए नेटवर्क हो।
अब CPALead मा शामिल हुनुहोस्
कम्पनी नाम: CPALead
प्रस्ताव प्रकारहरू: सीपीए, सीपीआई, सीपीएल, पीपीसी अफर, ब्यानर विज्ञापन, पप-अन्तर्गत विज्ञापन, र सामग्री लकरहरू।
न्यूनतम भुक्तानी: $ १
भुक्तानी फ्रिक्वेन्सी: दैनिक भुक्तानी
भुक्तानी विधि: चेक, PayPal, Payoneer, वायर, ACH, र Bitcoin।
२- ट्राभेल पेआउट्स:
२०११ मा फिर्ता शुरू गरिएको ट्राभल पेआउट अग्रणी यात्रा सम्बद्ध नेटवर्कहरू मध्ये एक हो र त्यसबेलादेखि बजारमा एक मजबूत स्थिति प्राप्त गरेको छ। नेटवर्कले २ 2011०,००० वेबमास्टरहरू र ब्लगरहरूलाई एकजुट गर्दछ र तिनीहरूलाई यात्रा ब्रान्डको साथ साझेदारी निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं यात्रा को लागी एक सम्बद्ध बन्न चाहानुहुन्छ, यो नेटवर्क तपाईंको लागि अर्को राम्रो चरण हुन सक्छ।
ट्रैवलपेआउट्सको साथ, तपाईं single० भन्दा बढी सम्बद्ध कार्यक्रमहरूमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ जस्तो एक्स्पिडिया, होटल्स डॉट, कायाक, बुकिंग डॉट, किवी डॉट इत्यादि।, एकल इन्टरफेसबाट। ड्यासबोर्डले दुबै अंग्रेजी र रूसीमा प्रत्येक विज्ञापनदाताहरूका बारे विस्तृत जानकारी समावेश गर्दछ र २ 80/24 ग्राहक समर्थन प्रदान गर्दछ जुन एक घण्टा भित्र अनुरोध of 7% अनुरोध गर्दछ। नेटवर्कको बारेमा कुनै प्रश्नहरूको उत्तर दिन एक ज्ञानब्यास पनि छ।
तपाइँ दर्जनौं सम्बद्ध उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँको अभियानहरू बृद्धि गर्न, जस्तै लिंकहरू, विजेटहरू, ब्यानरहरू, ह्वाइट लेबलहरू, एपिआइहरू, र अवतरण पृष्ठहरू। यसको उन्नत टेक्नोलोजी र निरन्तर सुधारको लागि धन्यवाद, ट्राभलपआउट सम्बद्ध नेटवर्कले तपाईंको व्यवसायलाई अधिकतम रूपान्तरण दरमा पुग्न मद्दत पुर्‍याउँछ र यसलाई अर्को चरणमा लैजान्छ।
ट्राभेलपाउट्स सम्बद्ध नेटवर्कमा सम्मिलित हुनुहोस्
ट्राभेल पेआउट्स विवरणहरू:
कम्पनी नाम: ट्राभलआउटहरू
भुक्तानी विधि: बैंक स्थानान्तरण, PayPal भुक्तान
न्यूनतम भुक्तानी: बैंक स्थानान्तरण (EUR 400, USD 500) र PayPal (EUR 40, USD 50)
सयौं र सह-स्थापित सम्बद्ध नेटवर्क को हजारौं बाट, ती मध्ये केही मात्र छन् जसले newbies लाई सहयोगी हात र सिकाउने अवसर प्रदान गर्दछ। MyLead यस्तो नेटवर्क हो जुन सम्बद्ध बजारमा प्रवेश गर्न चाहने सबैलाई उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान गर्दछ।
यो 2004 मा स्थापित भएको थियो र पोल्याण्ड मा स्थित एक मुख्यालय छ। यो एक अग्रणी सीपीए नेटवर्क को रूपमा पनि चिनिन्छ जुन यसको विज्ञापनकर्ताहरु र प्रकाशकहरुलाई पैसाको एक महत्वपूर्ण रकम प्रदान गर्दछ। आजको लागि, यसले करीव million० लाख डलर यसको विज्ञापनदाताहरू र प्रकाशकहरूलाई अतिरिक्त शिक्षण अनुभवको साथ भुक्तान गरिसकेको छ। मुद्रीकरणका लागि यहाँ पाँच विधिहरू छन् जस्तै सामग्री लक, सीपीए, सीपीएल, सीपीएस, पीपीआई, र एसएमएस। MyLead को प्रयोग गर्न गाह्रो प्रक्रिया होईन र तपाईले गर्नुपर्ने सबै नि: शुल्क खाता बनाउनुपर्दछ र यसको सुरूवात गर्नुहोस्।
योसँग एक विस्तृत र विस्तृत वेबसाइट छ जहाँ तपाइँ सबै उपलब्ध सम्बद्ध कार्यक्रमहरू, प्रस्तावहरू, र अधिक धेरै भेट्नुहुनेछ। यसको ग्राहक समर्थन पूर्णता भन्दा टाढा छ र तपाईंलाई उनीहरूले चाहेको कुनै पनि समयमा तपाईंलाई मद्दत गर्न तयार छ।
निःशुल्क MyLead सम्मिलित हुनुहोस्
MyLead भुक्तान विवरण:
न्यूनतम भुक्तानी: $ 20
भुक्तानी विधि: PayPal, Skrill, Bank Wire Transfer, Revolut, WebMoney, Bitcoin।
एड्भेन्डर बिक्रीलाई बढाउन र आय प्रवाहलाई बृद्धि गर्न अनलाइन मार्केटिंगमा पेशेवरहरूले स्थापना गरेको एक अग्रणी सीपीए मार्केटिंग नेटवर्क हो। एड्भेन्डर सीपीए आधारित नेटवर्क हो। यसले रूपान्तरण दर बढाउँदै तपाइँको लक्ष्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंलाई यस गतिविधिको लागि छनौट गर्न चाहेको कार्यको पहिचान गर्न सक्षम गर्दछ, जस्तै विशेष उत्पादनहरूको बिक्री वा साइनअप यदि तपाईंको सदस्यता सदस्यता-आधारित छ भने।
यदि तपाईं एक सम्बद्ध बजार हो र उत्तम सीपीए नेटवर्क खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तब एड्भेन्डर तपाईंको लागि उत्तम विकल्प हो। अन्य विज्ञापन नेटवर्कको विपरीत, Advendor सहयोगीहरूलाई अनुमोदन गर्न अत्यधिक कडा छैन। तिनीहरू सामान्यतया २ 24 घण्टा अधिकतममा सहयोगीहरू अनुमोदन गर्दछन्।
एड्भेन्डर सम्बद्ध नेटवर्कको अनलाइन मार्केटिंगमा ठूलो हात छ किनकि यसले सम्बद्धहरू वा सहयोगीहरूलाई प्रत्यक्ष पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ, नयाँ उत्पादहरूको मार्केटिंगको खोजीमा। यसले ठूलो दर्शकहरूको बीच वास्तविक समयमा तपाईंको व्यवसाय विकास गर्न तपाईंलाई सक्षम बनाउँछ। बिभिन्न क्षेत्रबाट विज्ञापनदाताहरु को हिस्सा हो एड्भेन्डर सम्बद्ध नेटवर्क लक्ष्य श्रोता अनलाइन पहुँच गर्न।
तिनीहरू पनि आफुसँग सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई%% कमिसन प्रस्ताव गर्दछ अन्यलाई सामेल हुन आमन्त्रित गरेर एड्भेन्डर
कम्पनी नाम: Advendor।
प्रस्ताव प्रकार: सीपीए, सीपीएल, सीपीएस।
न्यूनतम भुक्तानी: $ 50।
भुक्तानी फ्रिक्वेन्सी: भुक्तानी सर्तहरू साप्ताहिक हुन्।
भुक्तानी विधि: PayPal, Webmoney, वायर ट्रान्सफर, Bitcoin वालेट
फायरएड्सको स्थापना २०११ मा भएको थियो, यसको मुख्यालय पोल्याण्डमा अवस्थित छ। यो एक विश्वव्यापी एफिलियट मार्केटिंग नेटवर्क हो जुन विश्वभरि २,२०,००० भन्दा बढि रेजिष्टर्ड प्रकाशकहरू छन्। फायरएड्स एक लोकप्रिय सहबद्ध नेटवर्क हो जसले विश्वव्यापी पहुँचलाई यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई उच्च परिणामहरू द्रुत रूपमा प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। यो प्रयोगकर्ता-अनुकूल छ र यसको प्रकाशकहरु र विज्ञापनदाताहरु लाई उच्च लाभदायक राजस्व प्रदान गर्दछ।
यसले सीपीआई, सीपीए, र सीपीएल सहित अन्तर्राष्ट्रिय सीपीए मार्केटिंग अभियानहरू प्रस्ताव गर्दछ, उत्कृष्ट डेटा विश्लेषण र अनुकूलन प्रविधिको साथ जुन व्यावसायिक मार्केटरहरू र प्रकाशकहरूलाई इच्छित परिणामहरूको मूल्यांकन गर्न र मार्केटिंग लक्ष्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्दछ।
यसले उत्तम रूपमा बजार व्यवस्थित गर्दछ राम्रो उत्पादन स्ट्रिम उत्पादनको प्रचार गरेर र उच्च ट्राफिक प्राप्त गरेर। यसले एक उन्नत स्वामित्व प्रविधि समावेश गर्दछ जसले ग्लोबल मार्केटि inमा प्रकाशकहरूलाई उही कार्यफ्लोमा विशेषज्ञहरूलाई सँगै स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै स्तरमा ल्याउन इष्टतम परिणामहरू प्राप्त गर्न अग्रसर गर्दछ।
यसले तपाइँको प्रचारको लागि वेबसाइटमा अनलाइन प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ यसको प्रमोशनको लागि कुनै रकम लगानी नगरी। जब बिक्री भएको छ, तपाईं सीधै फायर एडलाई तिर्नुहुनेछ; यसैले, तपाईं सफलतापूर्वक आफ्नो उत्पादन र ब्रान्डको विज्ञापन गर्नुहुनेछ। यसले तपाईंलाई गुणस्तर प्रयोगकर्ताहरू, गुणस्तरको नेतृत्व लिन र प्रगति प्राप्त गर्न विश्वभरि उत्तम अवसरहरू भेट्न सहयोग गर्दछ।
तिनीहरू पनि फायर एड्समा आमन्त्रित गरेर तिनीहरूका सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई%% रेफरल कमिशन प्रस्ताव गर्दै छन्। फायर एड्स् प्रकाशकहरू र विज्ञापनदाताहरू सामेल हुनको लागि हाम्रो सिफारिस सम्बद्ध नेटवर्क हो।
फायर एड्स विवरणहरू:
कम्पनी नाम: म्याक्सबाउन्टी
प्रस्ताव प्रकार: सीपीए, सीपीएल, सीपीआई, सीपीएस।
भुक्तानी फ्रिक्वेन्सी: तत्काल भुक्तानी, नेट १ 15।
भुक्तानी विधि: बैंक स्थानान्तरण, ePayments, Paypal, WebMoney।
म्याक्सबाउन्टी # 1 हो सर्वश्रेष्ठ सीपीए नेटवर्क संसारमा। म्याक्सबाउन्टी क्यान्डियन आधारित प्रदर्शन मार्केटिंग नेटवर्क हेडक्वार्टर ओटावा, ओएन, क्यानडामा अवस्थित छ। यदि तपाईं अनुभवी एफिलियट मार्केटर हुनुहुन्छ भने, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईं आज म्याक्सबउन्टीमा सामेल हुनुहोस् र बढी पैसा कमाउन सुरू गर्नुहोस्।
म्याक्सबाउन्टीले उत्तम पायो सीपीए नेटवर्क पुरस्कार २०१,, २०१,, २०१,, २०१ 2013, २०१ 2014, र २०१ 2016 पनि। म्याक्सबउन्टीले सीपीए, सीपीआई, सीपीएल, र विश्व भर बाट सीपीए अफर प्रदान गर्दछ।
तिनीहरूसँग दावी छ कि उनीहरूसँग बढी छ ,30,000०,०००+ सम्बद्धहरू, १०००+ विज्ञापनदाताहरू, र २०००+ वर्तमान लाइभ प्रस्तावहरू। म म्याक्सबाउन्टीसँग पनि काम गर्दैछु; यसैले म तपाईंलाई म्याक्सबाउन्टीमा सम्मिलित हुन सिफारिस गर्दछु। सबै भन्दा राम्रो चीज मैले मन पराउँछु तिनीहरूका सहबद्ध प्रबन्धकहरू वास्तवमै मैत्री छन् र तपाईंलाई मद्दत गर्न सँधै तयार छन्। तपाईं आफ्नो सम्बद्ध प्रबन्धकसँग कुनै पनि समयमा ईमेल, फोन कल, वा स्काईप च्याट मार्फत कुरा गर्न सक्नुहुनेछ, र ती चाँडै तपाईंलाई जवाफ दिनेछन्।
म्याक्सबउन्टीले मात्र अनुभवी सीपीए मार्केटरहरू स्वीकार गर्दछ। यदि तपाईं अनुभवी एफिलियट मार्केटर हुनुहुन्छ भने, तब तपाईंलाई म्याक्सबाउन्टीमा सम्मिलित हुन स्वागत छ। तिनीहरू पनि एक नि: शुल्क शैक्षिक भिडियोहरू प्रदान गर्दछ तपाईंको एक सम्बद्ध बजारको रूपमा सुरू गर्नका लागि। तपाईं पनि Maxbounty को उत्पादन Maxbounty होस्टिंग प्रचार र sale 80 प्रति बिक्री प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं अरूलाई आमन्त्रित गर्न र १०% रेफरल कमिशन पनि कमाउन सक्नुहुन्छ।
प्रस्ताव प्रकार: सीपीए, सीपीआई, सीपीएल, सीपीएस,
न्यूनतम भुक्तानी: $ १००
भुक्तानी फ्रिक्वेन्सी: साप्ताहिक, नेट -१ ((पहिलो महिना)
भुक्तानी विधि: चेक, PayPal, वायर, Payoneer, ACH (प्रत्यक्ष जम्मा), Bitcoin
माद्रिभो एक अग्रणी अनलाइन मार्केटिंग एजेन्सी हो र यसको कुशल कामका कारण एफिलियट मार्केटिंगमा नेता मानिन्छ। यो पहिलो कम्पनी हो कि कहिल्यै शीर्ष CP सीपीए नेटवर्क भएको रूपमा डेब्यू गर्दछ। मोबाइल, सामाजिक, भिडियो, ईमेल विज्ञापन जस्ता प्रसिद्ध अनलाइन मार्केटि of च्यानलहरूको सहयोगमा ग्राहक अधिग्रहण, ब्रान्ड अप्टिमाइजेसन, ब्रान्ड जागरूकता रणनीतिहरूको सहायताले माड्रिभोले तपाईंलाई सफलताको मार्गमा डो .्याउँछ।
यो मार्केटिंग ईन्डस्ट्रीमा तपाईलाई सब भन्दा उच्च प्रदर्शन र सब भन्दा बढि गुनासो विज्ञापनदाताहरु लाई पहुँच पुर्‍याउन अनुमति दिन्छ। यो त्यसपछि अत्यधिक माग विज्ञापनदाताहरु र लोकप्रिय सम्बद्ध ट्राफिक च्यानलहरु को प्रकाशकहरु संग तपाइँको ब्रान्ड प्रचार गर्न को लागी जडान गर्दछ। त्यसो भए यसको प्राथमिक कार्य भनेको ब्राण्ड-नामित विज्ञापनदाताहरूलाई उच्च माग भएका प्रकाशकहरूसँग जोड्नको लागि उत्तम परिणामहरू प्राप्त गर्न विश्वभरि सबै ग्राहकहरूसँग बढी संलग्न हुन।
कम्पनी नाम: माड्रिको।
प्रस्ताव प्रकार: सीपीएम, सीपीसी, सीपीए, सीपीएल, सीपीएस, सीपीएम, पीपीसी।
भुक्तानी फ्रिक्वेन्सी: नेट 30०, नेट १ 15।
भुक्तानी विधि: PayPal, वायर ट्रान्सफर, चेक, ACH।
क्लिकडिलर एक अग्रणी प्रदर्शन मार्केटिंग नेटवर्क हो। क्लिकडिलरले एउटालाई दर्जा दियो उत्तम सीपीए नेटवर्क शीर्ष सीपीए नेटवर्कहरू बीच। क्लिकडिलर नेदरल्याण्डमा आधारित सीपीए नेटवर्क हो र अब यसले offices अन्य देशहरूमा यसको कार्यालयहरू विस्तार गर्‍यो। क्लिकडिलरले सीपीएल, सीपीआई, सीपीए, सीपीएस, र प्रति कल कल भुक्तान गर्दछ। यस बाहेक, उनीहरूले ड्रपशिपिंग अभियान पनि सुरु गरे। यदि तपाईं अनुभवी सीपीए मार्केटर हुनुहुन्छ भने, यो क्लिकडिलर तपाईंको लागि उत्तम सीपीए नेटवर्क हो।
तिनीहरू पनि उत्कृष्ट भुक्तान प्रदान र सधैं समय मा तिर्ने। त्यसकारण तिनीहरू बढि छिटो बढ्दै छन् र यस उद्योगमा धेरै लोकप्रिय भइरहेका छन्। तिनीहरूसँग १,2000,००० प्लस सक्रिय प्रस्तावहरूको साथ १ 180० देशका २००० प्लस विज्ञापनदाता छन्। क्लिकडिलरले आधिकारिक रूपमा १२ भाषाहरू २ 13,000/12 मा समर्थन प्रदान गर्दछ।
कम्पनी नाम: क्लिकडिलर
प्रस्ताव प्रकार: सीपीए, सीपीएल, सीपीआई, सीपीएस,
भुक्तानी फ्रिक्वेन्सी: नेट and० र भुक्तान द्वि-साप्ताहिक, साप्ताहिक र मासिक।
भुक्तानी विधि: चेक, PayPal, वायर, Payoneer, WebMoney, Paxum।
9- टोरो विज्ञापन:
टोरो विज्ञापन यसको सम्बद्ध नेटवर्क हो जुन यसको पछाडि छ वर्ष भन्दा बढीको अनुभवको साथ छ। पूर्ण रूपमा मार्केटिंग उद्योगमा केन्द्रित। तिनीहरू मिडिया खरीददारहरू, प्रदर्शन नेटवर्कहरू, र वेबमास्टर्स, अन्यमा शीर्ष रूपान्तरण अभियानको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्न सक्दछन्।
TORO विज्ञापन ट्र्याकिंग, रिपोर्टिंग, र अनुकूलन को मामला मा नवीनतम प्रविधिको सुसज्जित छ। टोरो विज्ञापनको सहबद्ध बजारमा दृष्टिकोण अनुभव र दक्षतामा आधारित छ, उत्तम रूपमा व्यवसायमा उत्तम परिणामहरू प्राप्त गर्नको लागि संयुक्त। सबै पक्षमा मिडिया प्रकारहरू, च्यानलहरू, र विज्ञापन ढाँचा कभरिंग हरेक पक्षमा लगातार वृद्धि प्रदान गर्ने मार्गको रूपमा, टोरो विज्ञापन तपाईंको यातायात मुद्रीकरणको लागि आदर्श पार्टनर बन्छ।
टोरो विज्ञापनले तपाईंलाई अधिकतम परिणामहरू उत्पादन गर्न अनुभव र दक्षता दिन्छ र देश, भाषा, ब्राउजर, उपकरण, र ओएस, इत्यादि परिष्कृत लक्ष्यीकरण प्रदान गर्दछ। यो सीपीए, सीपीआई, सीपीएल, र सीपीएस द्वारा समर्थित छ, र तपाईंलाई रूपान्तरण दरहरूको लागि भुक्तान गरिन्छ। ; धेरै सम्बद्ध कम्पनीहरूले CPA विज्ञापनबाट पैसा कमाइरहेका छन्। यस साइटको विशिष्टता यो हो कि यसले भाँचेको कपीराइट कानून समावेश गर्दैन, साथ साथै newbies स्वीकार गर्दैन।
सम्बद्धहरू यस नेटवर्कमा अरूलाई सन्दर्भित गरेर आफ्नो आय बढाउन सक्दछन्। आयोग दर%% छ; यो तपाइँको प्रदर्शन र हासिल प्रगतिमा निर्भर गर्दछ।
टोरो विज्ञापन विवरण:
कम्पनी नाम: TORO विज्ञापन।
भुक्तानी फ्रिक्वेन्सी: साप्ताहिक, नेट-7, र ​​नेट -२०
भुक्तानी विधि: बैंक स्थानान्तरण, Payoneer, Paypal, Bitcoins, ePayments।
पेर्फली एक अमेरिकी आधारित सम्बद्ध हो नेटवर्क, फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्थित मुख्यालय। पीयरफ्लाइ जनवरी २०० in मा सुरू गरिएको थियो। पीयरफ्लाइ पनि एक हो उच्चतम भुक्तानी सीपीए नेटवर्क संसारमा। पेर्फिलीले २०१ 1 मा # १ बेस्ट एफिलिएट नेटवर्क पुरस्कार प्राप्त गर्‍यो। तिनीहरू दावी गर्छन् कि उनीहरूसँग 2015००० प्लस एक्टिभ अफरहरू, १ 4000 देशहरूबाट k 75 के + सक्रिय प्रकाशकहरू, र २००० प्लस सक्रिय विज्ञापनदाताहरू छन्।
यदि तपाइँ अधिक अफरहरू र पैसा कमाउने थप तरिकाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तब पेर्सफिली तपाइँको लागि उत्तम नेटवर्क हो। तिनीहरूसँग हरेक कोठाबाट र विश्वव्यापी रूपमा प्रस्तावहरू छन्। पीयरफ्लाइले विश्वभर बाट सीपीए, सीपीआई, सीपीएल, र सीपीए अफर प्रदान गर्दछ। तीनिहरु पनि एक सम्बद्ध प्रबन्धक प्रदान गर्नुहोस् तपाईलाई प्रत्येक पटक मद्दत गर्न।
अहिले, पेर्फिफालीले केवल अनुभवी एफिलियट मार्केटरहरू स्वीकार गर्दछ। जसले कम्तिमा CP 500 कमायो कुनै पनि सीपीए नेटवर्कबाट। यदि तपाईं अनुभवी एफिलियट मार्केटर हुनुहुन्छ भने, तब तपाईंलाई PeerFly मा सामेल हुन स्वागत छ; अन्यथा, तपाईं कुनै पनि अन्य नेटवर्कमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ।
अपडेट: पेफर्ली बन्द हुँदैछ र उनीहरूको ढोका बन्द गर्दैछ।
कम्पनी नाम: PeerFly
भुक्तानी फ्रिक्वेन्सी: नेट 30०, नेट १ 15 र नेट and र भुक्तान द्वि-साप्ताहिक, साप्ताहिक र दैनिक
भुक्तानी विधि: चेक, PayPal, वायर, Payoneer, ACH (प्रत्यक्ष जम्मा)।
११- ग्लोबल वाइड मिडिया:
डाटा विज्ञान द्वारा संचालित डिजिटल मार्केटिंग, डाटा विज्ञान द्वारा संचालित मार्केटिंग संसारमा एक प्रसिद्ध कम्पनी, प्रमुख ब्रान्डहरू र एजेन्सीहरूको लागि प्रीमियम मिडिया समाधान प्रदान गर्दछ। यसको प्राथमिक कार्य उच्च प्रदर्शन गर्ने विज्ञापनदाताहरू र प्रकाशकहरूलाई सक्रिय श्रोताको साथ मुख्य रूपमा ब्रान्ड अभियानहरू मार्फत र कहिलेकाँही सीधा जवाफहरू मार्फत जडान गर्नु हो।
यसको टेक्नोलोजीले सटीक रिपोर्टहरू प्रदान गर्दछ र ब्रान्डहरूलाई उचित ढizing्गले अनुकूलित गरेर प्रचार गर्दछ। विश्वव्यापी मिडिया आपूर्तिकर्ताहरू विश्वभरि उपस्थित छन्, १०० देशहरूमा सफलतापूर्वक अभियानहरू सञ्चालन गर्दै। यसका विशेषज्ञ सुविधाहरू र सहयोगी टीमले विगत केही वर्षहरूमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेको छ यसैले विश्वभरिका धेरै व्यक्तिको हृदय जितेको छ।
योसँग b० बिलियन वार्षिक बिक्रीको साथ मिलियन मासिक रूपान्तरण दरहरू उत्पादन गर्ने शक्ति छ; ग्राहकहरू आफ्नो ब्रांडको सुरक्षा र उनीहरूको ब्यापारको प्रचारको लागि यसलाई रोज्न रुचाउँछन्। ग्लोबल वाइडले विज्ञापनदाताहरूलाई लक्षित दर्शकहरूलाई भेट्न, इष्टतम प्रगति प्राप्त गर्न इष्टतम च्यानलहरू निर्धारण गर्न र नाफा अधिकतम गर्न मद्दत गर्दछ।
ग्लोबल वाइड मिडिया विवरण:
कम्पनी नाम: A4D।
प्रस्ताव प्रकार: सीपीए, सीपीएल, सीपीएस, सीपीएम, सीपीसी।
भुक्तानी फ्रिक्वेन्सी: नेट 30०, मासिक भुक्तानी।
१२- मिल्दो विज्ञापन:
सहि सीपीए कम्पनी छनौट र नेटवर्क तपाईंको बजार सफलताको एक अनिवार्य अंश हो किनभने यसले तपाईंलाई सही निर्णय लिन मद्दत गर्दछ र तपाईंको समय बचत गर्दछ। यसले विश्वका १ 180० देशहरूमा उच्च-गुणवत्ता प्रस्तावहरू प्रदान गर्दछ। यसले ग्राहक र प्रकाशकहरूको बीचमा राम्रो नाम कमाएको छ किनकि यसले एकल भुक्तानी नगरीकन समयमै भुक्तान गर्दछ।
यो एक को एक उन्नत सुविधा छ व्यावसायिक सामग्री लॉकर यसले तपाईंलाई आगन्तुकहरूलाई उनीहरूको निवास देशको आधारमा बिभिन्न अफरहरू पठाउन मद्दत गर्दछ र तपाईंको ट्राफिक धेरै प्रस्तावहरूको बीचमा वितरण हुँदा तपाईंलाई उत्कृष्ट प्रदर्शन निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंलाई तपाईंको आगन्तुकहरू ट्र्याक गर्न अनुमति दिँदछ जस्तै पेशेवर ट्र्याकरहरू उनीहरूको प्रतिक्रिया हेर्नका लागि, किनकि ट्र्याकिंग सफलताको कुञ्जी हो।
तपाइँले अनावश्यक देशहरूलाई सामग्री देखाउन प्रतिबन्ध लगाउन सक्नुहुन्छ वा केही देशहरूको लागि विशेष प्रस्तावहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यस कुशल सीपीए नेटवर्क को मद्दत संग, तपाईं चाँडै आफ्नो ट्राफिक बढ्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईंसँग प्रकाशित गर्न उत्कृष्ट गुणस्तरको सामग्री छ र सजिलै एक महिनामा सयौं डलर कमाउन सक्नुहुन्छ।
मिडिया विवरणहरू विज्ञापन गर्नुहोस्:
कम्पनी नाम: मिडिया विज्ञापन।
भुक्तानी फ्रिक्वेन्सी: नेट 30०, नेट १ 15, नेट 7, द्वि साप्ताहिक भुक्तानी।
१ - - A13D:
A4D एक प्रदर्शन मार्केटिंग नेटवर्क हो; यसको कम्पनी सान डिएगो मा स्थित छ, को रूपमा पनि चिनिन्छ Ads4dough। यो सीपीएस, सीपीए, र सीपीएल द्वारा समर्थित छ, हजारौं विज्ञापनदाताहरु र सम्बद्ध विश्व भर मा सेवा गर्दै। यो विशेष गरी G4networks को विकल्प हो।
यसले तपाइँलाई उच्च रूपान्तरण दर प्रदान गर्दछ र नक्कली ट्राफिक भेट्नबाट रोक्दै ट्राफिक बढाउँदछ। यस नेटवर्कको मद्दतले तपाईसँग अनलाइन सेवाहरू जस्तै स्वास्थ्य, सौन्दर्य, फिटनेस, खेलहरू, ई-वाणिज्य, र वित्त, आदिमा पहुँच हुनेछ।
यसले तपाईंलाई नेट १2आधारमा २% को कमिसन रेट प्रस्ताव गर्दछ, र भुक्तान हप्ताको कुनै पनि ढिलाइ बिना गरिन्छ। भुक्तानीको मोड तार, चेक, वा बैंक निक्षेप मार्फत हो। तपाईं आफ्नो नेटवर्क बढाउन सक्नुहुनेछ अन्यलाई यो नेटवर्कमा सन्दर्भ गरेर।
प्रस्ताव प्रकार: सीपीए, सीपीएस, सीपीआई, सीपीएल।
भुक्तानी फ्रिक्वेन्सी: नेट 7, साप्ताहिक भुक्तानी।
भुक्तानी विधि: वायर ट्रान्सफर, चेक, ACH।
१-- सबै प्रस्तावहरू माथि:
यो जनवरी २०११ मा स्थापित भएको थियो र ओरेगनको यूजीनमा अवस्थित छ। यो बजार उद्योगमा सब भन्दा ठूलो र द्रुत रूपमा बढेको सम्बद्ध नेटवर्क हो। यसले तपाईंको ब्लग वा वेबसाइटको मुद्रीकरणमा मद्दत गर्दछ। बीबीबीका अनुसार (राम्रो व्यापार ब्यूरो), यो व्यापार उद्योग मा एक रेटिंग मिल्यो।
यो विज्ञापनदाता र सम्बद्धहरूलाई जोड्दछ। यस नेटवर्कमा, तपाइँ तपाइँको वेबसाइट मा राखिएको प्रत्येक विज्ञापन को लागी भुक्तान हुनेछ, त्यसैले जब एक ग्राहक उत्पादन खरीद गर्न सहमत हुन्छ, तपाइँ एक कमीशन पाउनुहुनेछ। प्रक्रिया तपाईंको ईमेल सूची वा वेबसाइट मार्फत गर्न सकिन्छ। यसले तपाईंलाई छनौट अनुमति दिन्छ कि तपाईं कुनै पनि अघि कुनै सूचना बिना कुनै पनि समयमा अर्डर रद्द गर्न सक्नुहुन्छ।
तिनीहरूको टोली सक्रिय छ 24/7 ग्राहकहरु सेवा गर्न। प्रकाशकलाई न्यूनतम भुक्तान सीमा १०० डलर हो। सबै-अफरहरू माथि ब्लगर्सलाई सिफारिश गरिन्छ कि उच्च ट्राफिकको साथ ब्लग वा वेबसाइट राख्नुहोस् ताकि तिनीहरूले यस नेटवर्कबाट फाइदा लिन सक्दछन्। एक ब्लगमा ग्राहकहरु वा आगन्तुकहरुको एक ठूलो संख्या भएको यस नेटवर्क को मतलब यो स्थिति मा ब्लगर्स को लागी निश्चित सफलता को लागी हो।
सबै अफर विवरणहरू माथि:
कम्पनी नाम: सबै अफरहरू भन्दा माथि।
प्रस्ताव प्रकार: सीपीएल, सीपीए।
भुक्तानी विधि: वायर ट्रान्सफर, पेपैल, चेक।
यो एक कुशल र प्रदर्शनमा आधारित इन्टरनेट मार्केटिंग कम्पनी हो। यसले विश्वव्यापी विज्ञापनदाताहरू र सम्बद्ध कम्पनीहरूमा भरोसा र राम्रो प्रतिष्ठा निर्माण गरेको छ। योसँग उत्तम समर्थन टोली छ जसले विज्ञापनदाताहरू र सम्बद्ध निकायहरूलाई समस्याहरू समाधान गर्न समर्थन गर्दछ र उनीहरूलाई कसरी अधिक पैसा कमाउन र आफ्नो साइटलाई उत्कृष्ट प्रगति गर्नका लागि प्रबर्धन गर्न मार्गदर्शन गर्दछ।
यो अनलाइन बजारमा लोकप्रिय छ किनकि यसले उच्च भुक्तान प्रस्तावहरू र अभियानहरू प्रदान गर्दछ। सीपीए प्रवृत्तिले नेट-आधारित १ payments भुक्तानी प्रस्ताव गर्दछ। CPAtrends का साथ काम गर्दा तपाईं रमाइलो हुनुहुनेछ र एक रमाईलो अनुभव पाउनुहुनेछ जुन तपाईंलाई निश्चित रूपमा तपाईंको ब्रान्डको प्रमोशनमा मद्दत गर्दछ।
कम्पनी नाम: CPATrend।
प्रस्ताव प्रकार: सीपीएल, सीपीएस, सीपीए, सीपीआई / अनुप्रयोग स्थापना, प्रति कल भुक्तान गर्नुहोस्
भुक्तानी फ्रिक्वेन्सी: नेट १ 15, द्वि-साप्ताहिक र साप्ताहिक भुक्तानीहरू।
भुक्तानी विधि: वायर ट्रान्सफर, पेपैल, चेक। Payoneer, ACH।
उत्कृष्ट कम्पनीहरूले बजार व्यवसायमा २ 24 बर्षको बर्षमा कोलोराडोमा कार्य गर्नको लागि Adperio लाई धेरै पटक मान्यता दिएका छन्। यो साना व्यवसायका लागि २०१ 2017 मा एक पुरस्कार विजेता कम्पनी हो। Adperio एक प्रीमियम मोबाइल प्रदर्शन मार्केटिंग नेटवर्क हो।
योसँग एक विशिष्ट गुण छ जुन आईओएस र एन्ड्रोइड मोबाइल अनुप्रयोग विज्ञापनकर्ताहरूलाई उच्च प्रदर्शन गर्ने रणनीतिहरू र ट्राफिक संसाधनहरूसँग जोड्दछ, जसले चाहेको लक्ष्यहरू पूरा गर्न मापन र उच्च सment्लग्नता पोस्ट-स्थापना गतिविधि बताउँदछ। यो उद्योग अन्तर्दृष्टि र तपाईको मोबाईल मार्केटि promote लाई बढावा दिन सबै भन्दा राम्रो अभ्यासहरू प्रदान गर्दछ, र यसको सहयोगी मार्केटिंग टीमले तपाईंलाई आफ्नो ब्रान्ड सुरक्षित गर्न र सुरक्षित मार्केटिंगबाट अधिक पैसा कमाउन मद्दत गर्दछ।
कम्पनी नाम: Adperio।
प्रस्ताव प्रकार: सीपीए, सीपीएल, सीपीआई
भुक्तानी फ्रिक्वेन्सी: नेट 30०, साप्ताहिक र मासिक भुक्तानीहरू।
एसआई मार्केटिंग इंकका संस्थापकहरूले उनीहरूको सीपीए एफिलियट नेटवर्कको "समाज आमन्त्रित" बाट "मोन्स्टरअड्स" मा पुनःब्रेन्डिंग घोषित गरे। मुख्य कारण परिवर्तन अनलाइन विज्ञापन उद्योगमा एक "अधिक सान्दर्भिक ब्रान्ड" ल्याउनु थियो। प्रकाशकहरू र सम्बद्ध व्यक्तिहरूले डेटिकल ठाडोको कारण मोन्स्टरड्सलाई प्राथमिकता दिन्छन्, तर हालसालैको समयमा यसले आफ्नो बृद्धिलाई बढावा दियो र अन्य गैर-डेटि dating ठाडोको कारण प्रसिद्धि प्राप्त भयो।
प्रकाशकहरू र विज्ञापनदाताहरू यस नेटवर्कमा सामेल हुन बढी रुचि राख्दछन् किनकि यसले सयौं भन्दा बढि प्रस्ताव गर्दछ। यसले गुणस्तरीय ट्राफिक र सही खण्डन गरिएको मेट्रिक्स प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं विजयी परिणामहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले मोन्स्टरड्स प्रदर्शनमा सामेल हुनुपर्दछ र यस नेटवर्कको साथ अभियानहरू सफलतापूर्वक चलाउनुपर्नेछ। MonsterAds टोली अत्यधिक समर्थित छ र विश्वव्यापी समयमा ग्राहकहरु को सुविधा को लागी बिभिन्न समयमा काम गरीरहेको छ।
कम्पनी नाम: MonsterAds
प्रस्ताव प्रकार: सीपीसी, सीपीए, सीपीएल, सीपीएस
भुक्तानी विधि: वायर ट्रान्सफर, पेपैल, चेक, र Payoneer।
मोबिडीया एक लोकप्रिय र पुरस्कार-विजेता मोबाइल सम्बद्ध नेटवर्क हो जसले उत्कृष्ट टेक्नोलोजिकल सुविधाहरू राख्दछ र एफिलियट मार्केटरहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन मोबाइलमा विशेषज्ञता प्रदान गर्दछ। योसँग नि: शुल्क एकीकृत ट्र्याकर छ जसले सजीलै तपाइँको खरीद अभियानहरूलाई अनुकूलित गर्दछ। परीक्षण अभियानहरूमा तपाईंको पैसा खर्च नगर्नुहोस्; विश्वसनीय अभियानहरू प्रयास गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई फाइदा गर्दछ।
यससँग बहु-सांस्कृतिक समर्थन टोली छ जुनसँग धेरै भाषाहरू बोल्ने क्षमता छ। मोबिडीया एकदम कुशल छ, सम्पर्क गर्नको लागि हप्ताको प्रत्येक दिन उपलब्ध छ; यसैले, यो उद्योग मा द्रुत प्रतिक्रिया को लागी प्रसिद्ध छ।
यो एक शैक्षिक प्लेटफर्म हो जहाँ व्यक्तिले मार्गनिर्देशन लिन्छन् र कसरी सिक्छन् कि कसरी उनीहरूले आफ्नो मार्केटिंग अनुभव सुधार गर्न र उनीहरूको प्रगति गर्न सक्छन्। मोबिडाई मोबाइल सौंदर्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, भिडियो, डेटि,, खेलहरू, अन्य अनुप्रयोगहरू, आदिको रूपमा सम्बन्धित २००० भन्दा बढी अभियानहरू सञ्चालन गर्दै छ।
कम्पनी नाम: मोबिडा
प्रस्ताव प्रकार: सीपीए, सीपीआई, सीपीएल, सीपीएस, र मोबाइल।
न्यूनतम भुक्तानी: € १००
भुक्तानी फ्रिक्वेन्सी: नेट 30०, त्यसपछि साप्ताहिक।
भुक्तानी विधि: Paypal, वायर, Paxum, Payoneer, Payza।
माथि सूचीबद्ध सूचीबद्ध नेटवर्कहरू शीर्ष सीपीए नेटवर्कहरू हुन् जुन तपाईं २०२० मा सामेल हुन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइट राजस्व बढाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईंले सीपीए नेटवर्कमा आजै सामेल हुनुहुनेछ र सहि अफरहरू प्रचार गरेर बढि पैसा कमाउन सुरु गर्नुहोस्।
सीपीए सर्वश्रेष्ठ सीपीए नेटवर्क, सीपीए, सीपीए नेटवर्क
समर्थन अप्रिल 23, 2021 अप्रिल 23, 2021 टिप्पणीहरू बन्द कसरी फेसबुक बाट पैसा बनाउन को लागी
धेरै व्यक्तिहरू सोच्दछन् कि फेसबुक केवल एक सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट हो र तपाईं यसलाई एक्लो मनोरन्जनको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ वा खाली समय भर्नुहुन्छ। केवल केहि व्यक्तिलाई थाहा छ फेसबुक लाई पैसा प्राप्त गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यो त सम्भव छ यदि तपाईंसँग सही रणनीति छ र चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्। फेसबुक ठूलो बजार भएको छ। यदि तपाइँ यस बजारलाई मुद्रीकरण गर्ने तरिका सिक्नुहुन्छ भने, तपाइँले फाइदा लिन सुरू गर्नुहुनेछ।
समर्थन अप्रिल 23, 2021 अप्रिल 23, 2021 टिप्पणीहरू बन्द गुगल एड्सेन्समा र कसरी तपाईंको खाता अनुरोध स्वीकार गरिनेछ
गुगल एडसेन्स प्रकाशकहरूको लागि पैसा उठाउने सब भन्दा सजिलो र विश्वासिलो तरिकाहरू मध्ये एक हो ज्ञान र लिखित अनुभव साझा गरेर। २०१२ मा गुगल एड्सेन्सले इन्डोनेसियाली भाषा वेबसाइटहरूलाई समर्थन गर्दछ, धेरै लेखकहरू र ब्लग मालिकहरू जसले उनीहरूको ब्लग वा साइटहरू प्रकट गर्छन् जुन उनीहरूले गुगलको भुक्तान प्रति क्लिक (पीपीसी) कार्यक्रममा भाग लिनुपर्दछ।
समर्थन अप्रिल 23, 2021 अप्रिल 23, 2021 टिप्पणीहरू बन्द कसरी सानो पूँजीको साथ इन्टरनेटबाट पैसा प्राप्त गर्ने बारे
के कोही पनि एक सफल उद्यमी हुन सक्छ? सक्नुहुन्छ, अवश्य पनि, तपाई सक्नुहुन्छ। समस्या केवल कहाँ सुरु गर्ने हो? अघिल्लो पोष्ट-पोस्टको विपरित, यस पटक हामी अनलाइन व्यवसायहरू र कसरी इन्टरनेटबाट पैसा पाउने भनेर छलफल गर्न चाहन्छौं।
समर्थन अप्रिल 23, 2021 अप्रिल 23, 2021 टिप्पणीहरू बन्द १ Cheap सस्तो एसईओ उपकरणमा, नि: शुल्क, र तपाईंको वेबसाइट विश्लेषण गर्न उत्तम
वेबसाइट विश्लेषण र अप्टिमाइजेसन एसईओको नजिकबाट सम्बन्धित छ। सर्च इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (एसईओ) वेबसाइटमा ट्राफिकको गुणस्तर र मात्रा सुधार गर्ने एउटा तरिका हो ताकि यो गुगल खोजी परिणामहरूको शीर्ष स्तरहरूमा देखा पर्न सक्दछ। यस लेखमा, तपाइँ १ best उत्तम सस्तो SEO उपकरणहरू पाउनुहुनेछ, आफ्नो वेबसाइटको लागि नि: शुल्क पनि।
समर्थन अप्रिल 23, 2021 अप्रिल 23, 2021 टिप्पणीहरू बन्द एक पारस्परिक लिंक के हो र यसले एसईओ वेबसाइटलाई कसरी असर गर्छ?
विश्व एसईओमा पारस्परिक लिंकहरू धेरै सामान्य चीजहरू हुन् किनकि मूल रूपमा, एक वेबसाइटबाट अर्को वेबसाइटमा ब्याकलिंक्सको गठन प्रक्रिया हो जुन साइट मालिकले नियन्त्रण गर्न सक्दैन।
समर्थन अप्रिल 23, 2021 अप्रिल 23, 2021 टिप्पणीहरू बन्द अग्रिम तपाईंको व्यवसाय को लागी स्थानीय SEO मा पूर्ण गाईडमा
तपाईं मध्ये एक भर्खरै एक व्यापार शुरू गरेका छन् को लागी, तपाइँ तपाइँको व्यापार वेबसाइट खोज ईन्जिन मा अधिक उपभोक्ताहरु पाउन को लागी आएको चाहानुहुन्छ। त्यो प्राप्त गर्न, तपाईं स्थानीय एसईओ वा स्थानीय एसईओ को फाइदा लिन सक्नुहुन्छ।
समर्थन अप्रिल 23, 2021 अप्रिल 23, 2021 टिप्पणीहरू बन्द कसरी गुगल मा पहिलो रैंकिंग प्राप्त गर्न को लागी
गुगललाई वर्गीकरण गर्ने मेशिनमा पहिलो श्रेणी प्राप्त गर्नु तपाईंको अनलाईन व्यापारको सफलताको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्धारक हो। तपाईं केवल एक ब्लगर हुन सक्नुहुनेछ जुन व्यक्तिगत रूपमा काम गर्दछ वा तपाईं कम्पनी प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, जे भए पनि, तपाईंको वेबसाइटको सफलताको लागि यो लक्ष्य हासिल गर्न तपाईंसँग एक वेबसाइट आवश्यक छ।
समर्थन अप्रिल 23, 2021 अप्रिल 23, 2021 टिप्पणीहरू बन्द कसरी Google एनालिटिक्स एक व्यापार ट्र्याकिंग उपकरण को रूप मा उपयोग गर्न को लागी
गुगल एनालिटिक्स वेबसाइट मालिकको स्वामित्वमा रहेको एक धेरै यादगार उपकरणहरू मध्ये एक हो। गुगल एनालिटिक्सबाट भ्रमण गर्ने ट्र्याकिंग सुविधाहरूले तपाईंलाई वेबसाइट ट्राफिक निगरानी गर्न सजिलो बनाउन सक्छ।
समर्थन अप्रिल 23, 2021 अप्रिल 23, 2021 टिप्पणीहरू बन्द गाइड SEO copywriting मा।
ब्लगर वा अनलाइन मार्केटि media मिडिया द्वारा सँधै एउटा ठूलो चुनौती भनेको एसईओ मैत्री सामग्री कसरी लेख्ने र पढ्नको लागि आकर्षक पनि छ र अरुलाई रुचाइएको वा वितरित गर्नु हो। किनभने जब तपाईं अनलाइन सामग्री प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यहाँ नियम र शर्तहरू छन् कि तपाईं बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न। यस कारण यो एसईओ प्रतिलिपि अधिकार गाईड तपाईलाई हेर्न र लागू गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ।